Uma ungumnikazi ikhaya suburban noma ngasese, cishe uyazi ukuthi ukuba nethemba zokufudumeza akudingekile. Ekuphileni awukwazi ukwenza ngaphandle amanzi ashisayo, futhi ukulithola ngezindlela ezivamile okuqinile-amaziko zokhuni namalahle Yiqiniso, kungenzeka, kodwa kungenye into ehluke kakhulu enzima futhi ezingcolile. Kulokhu, ukulungele basisize gas Ukushisa.
Kubhayela ukulungele ukunikeza abendlu amanzi ashisayo hhayi kuphela, kodwa futhi ukuba abe yingxenye yalo lonke uhlelo. Imishini enjalo kungaba ehambisana nezidingo ukushintsha ehlobo / ubusika phakathi izindlela. Ukuba khona umuntu ekusebenzeni kahle kubhayela cishe hhayi oludingekayo. Kuphela ngezikhathi ezithile ngeke wayenomuzi kufanele abe idivayisi ukunakwa.
Ukuqinisekiswa kwe kuhilela ukuhlolwa, elizovimba zokugwema ukuphuka, okuyinto ebaluleke ikakhulukazi ebusika. Emakethe e anhlobonhlobo yesimanje Ukushisa imishini presents boilers "Electrolux". Zingaba single- noma kabili nentaba.
Kaningi, abathengi ukucabanga kakhulu mayelana nokuthi iziphi izinhlelo imodeli ukukhetha. Uma ufuna ukuhlomisa uhlelo Ukushisa namanzi ashisayo okungukuthi, ephelele kabili kubhayela. Ngezinye izikhathi kuyenzeka futhi ukuze isidingo samanzi ashisayo kungaphezu anganikeza kubhayela ezivamile. Akukho lutho okufanele ukhathazeke ngakho. ungakwazi ukufaka kubhayela zangaphandle ukuxazulula inkinga. Lokhu kungase kudingeke uma usebenzisa boilers odongeni-agibele amahhashi. Njengoba isibonelo imishini echazwe kufanele sicabangele kubhayela igesi "Electrolux", mayelana izici iluphi okuzoxoxwa ngalo ngezansi.
Uphenyo boilers phansi brand FSB 15 Mi / HW
Lokhu imishini uyakwazi izindawo ukukhonza, endaweni ingqikithi 140 m 2. Njengoba kuveziwe ngabathengi, kudingeka ukufakwa ukuhlomisa isibilisi. Iyunithi has ezifundeni ezimbili zokusebenza, omunye elinikeza hot amanzi, kanti elinye - Ukushisa ngempumelelo.
Ungakwazi ukulawula kudivayisi ngokusebenzisa ibhodi electronic, esemgwaqweni phezulu izindlu. Abathengi like yokuthi idivayisi ifakwe umsebenzi evimbela kumiswa kwegciwane amanzi ashisayo wesifunda. Umklamo has a cast iron ukushisa ephezulu amandla izinto.
Lokhu kubhayela igesi "Electrolux", njengoba kugcizelelwa abathengi, has a kubhayela 100 l. Lapho ukushisa ukumelana abicah hydroblows kuvuse pads ezikhipha ukuhlanekezela weJiyomethri. ukuthungela Esitebeleni kungenzeka ngisho ingcindezi ubuncane igesi. Lokhu kwandisa UKUQINA ilangabi sikaphalafini futhi ayikuvumeli ukuba kuxazululwe phezu enethiwekhi.
Uphenyo letimbili wesifunda kubhayela brand Hi-Tech 32Fi
Lokhu imishini, ngokuvumelana abathengi, Kuyinto elula kakhulu ukusebenzisa. On iphaneli yangaphandle kuyinto ukubonisa elikuvumela ukuba ulungise futhi ukulawula nemingcele yokusebenza. udonga Kuchazwe hung gas okokubilisa "Electrolux", ukubuyekezwa okumele ukukusiza wenze izinqumo ezinhle, kungaba usebenza LPG. Ngaphezu kwalokho, umenzi uye walungiselela operation eyodwa ngaphezulu - a phansi efudumele.
Uma kuyoba khona ukunikezela igesi noma ayeke ukunxanela ke ukusebenza lock, ephumula ekusebenzeni isibilisi. Abathengi like yokuthi kule divayisi kungenziwa ogibele udonga. Ngaphezu kwalokho, umsebenzisi Ungaxhuma isilawuli wireless esikude. Abathengi ngokuvamile akhethe le imodeli futhi ngesizathu ukuthi ifakwe umzimba ipuleti ukushisa amanzi ashisayo supply. Amanzi ashisayo kuyinto umthengi izohlala ezingeni lokushisa elifanayo, unesibopho lo msebenzi okhethekile "Induduzo".
Operating Imiyalelo Model
Uma unquma ukuthenga gas okokubilisa "Electrolux", manual ukuthi kufanele zihlolwe ngaphambi imishini yokusebenza. Kusukela ke ungathola ukuthi imithetho kumele ilandelwe. Ngokwesibonelo, washintsha ukuba uhlobo oluhlukile igesi kungase kwenziwe kuphela uchwepheshe ofanelekayo. Njengoba sesondlo, kumele labetibambile cishe kanye ngonyaka.
Ekupheleni isizini Ukushisa, kubhayela kufanele zihlolwe ukuze uqiniseke ukuthi zisesimweni esihle. Yonga imali futhi aqinisekise ukuphepha kwezingane ezihlukunyeziwe unga, uma njalo ukugcina idivayisi. Turbofan gas okokubilisa udonga "Electrolux" kumele babhekane sikaphalafini zihlanzwe kanye ngonyaka. Njengoba imvamisa efanayo kuyadingeka ukuhlola isimo umzimba ukushisa, singadinga ukususwa ngokudlulisa ezifakwa ngaphandle nangaphakathi. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi ukwahlukanisa ekamelweni omlilo uhlala kuyavumelana. Zezakhi namanzi kanye negesi amapayipi kufanele uphawu.
Ukulungisa of kubhayela
Uma uthenge kubhayela igesi "Electrolux", kufanele uzijwayeze izisekelo wokulungisa mishini. Phakathi kwezinkinga njalo kakhulu futhi kufanele ukwaba zokugwema ukuphuka omlilo inzwa. Uma lokhu kwenzeka, kumele ukucisha isibilisi bese uvale valve igesi, kokushiya kudivayisi kuze ayaphola phansi. Ngemva kwesikhashana, igumbi zizobuyela uhlole igesi iphunga.
Kubhayela kungenziwa inikwe amandla kabusha uma okusalungiswa kulungile. Kungenjalo, shayela nabasebenza yesondlo. Njengoba enye yezinkinga ezivamile imishini igesi okweqile. Ekhuluma ewukuhlakanipha okwenziwe isizathu esivuna ezishintshayo ukwehluleka noma odla we umzimba ukushisa. Hlanza umzimba ukushisa ungakwazi ngumnikazi. Nale akufanele kube nzima, kodwa kufanele uqaphe kakhulu. Ngenxa yale njongo a umzimba ukushisa sisuswa futhi bahlanza nge ibhulashi wire. Lapho kuziwa umzimba ukushisa ithusi, ibhulashi kufanele itsatfwe isiponji metal ukuthi isetshenziselwa ukuwasha izitsha.
Ukulungisa of kubhayela igesi ngamalahle "Electrolux" kungase kudingeke uma kunenkinga nge fan umfutho. Isizathu kulokhu kukhona amabombo. Uma fan ayisekho ukuthuthukisa isilinganiso esifanele isivinini, kufanele sizame ukulungisa inkinga ngokushesha ngangokunokwenzeka. Kuze kube yimanje, ezingemuva fan isuswe, uwela stator, futhi amabombo kuthiwa nivame. Ungasebenzisa amafutha engine, kodwa uma kungenzeka kangcono ukusebenzisa kwakwakhe carbon ngezinto ukushisa ukumelana.
Kwezinye ukulungisa ochwepheshe ukusiza scheme "Electrolux" gas okokubilisa. Uma ungenalo baqonde lezi zibalo, kungcono ukuphathisa onguchwepheshe ukulungisa inkinga.
Ngaphambi kokuthenga a kubhayela igesi kufanele kukhunjulwe ukuthi imishini yidivayisi ephezulu. Lokhu kungenxa yokuthi iyunithi isebenzisa igesi, amanzi ashisayo kanye sishiswe ngomlilo. Kubalulekile siqambe yimuphi amathuba ubuthi yomuzi ngabangaphandle-carbon monoxide. Uma umbuzo ikakhulukazi obakhathalelayo, kubalulekile ukuqinisekisa ukusebenza okufanele, ukuqaliswa imithetho lobuchwepheshe kanye service esifike ngesikhathi.
Ukulimala concomitant. ukuhlukumezeka Multiple futhi kuhlanganiswe
I-Great Industrial Revolution: impumelelo nezinkinga (itafula)